Ndị na-emepụta ihe na-echekwa ihe na-echekwa ihe na - echebe ndị na - echekwa ihe na China, Chinalọ ọrụ
Ngwaahịa nke 100% Polyester Sherpa Fleece Underblanket
100% Polyester Microfiber Quilt Mattress Kedo akwa
100% Polyester Microfiber Quilt Matress Cover
Inogide mgbochi ndina chinchi okomoko King Size Hypoallergeni ...
100% owu 220gsm Terry ákwà na 0.025mm TPU akpụkpọ ahụ & 100% polyester 105gsm kpara uwe mwụda
Nkọwapụta mpempe akwụkwọ Agba White Notes na-agbanwe agbanwe gburugburu Size Ejima / Ugboro abụọ / Queen / King / Cal King Nkọwapụta Tinye mgbochi mite mmadụ, nwere ike mma-echebe gị site àjà
100% Polyester Jụrụ Waterproof Matress Cover
Nkọwapụta Ngwaahịa Ngwaahịa 100% Polyester Jụrụ Waterproof Matress Cover Front 100% Polyester 130gsm jụrụ ákwà + 30gsm TPU ， sket 100% polyester 130gsm jụrụ ákwà jersey Agba White Note na-agbanwe gburugburu Size Twin: 42 × 78 + 12Queen: 60 × 78 + 12 King : 78 × 72 + 12 Ahịa Queen: 60 × 78 + 12100pcs: $ 6.30 / pc 500pcs: $ 6.00 / pc 1000pcs: $ 5.75 / pc
100% Cotton kpara Waterproof Ohiri Isi echebe
Ihe: 100% owu kpara na TPU TTL: 130GSM. Agba: White / acha anụnụ anụnụ / Pink / Purple ma ọ bụ ahaziri dị ka ihe ị chọrọ. Nkwakọ ngwaahịa: carelabel, tinye kaadị, bọọdụ ntinye, ihe mmado, polybad, katọn.
100% Cotton Nkasi Obi Mattress Topper
Anyị etinyego nnukwu mkpa na ịdị mma. Anyị nwere usoro nke anyị nwere ike ịkwado na ogo. Anyị nwere usoro ise n'oge usoro ahụ gụnyere ihe, ịkwa akwa, ngwaahịa ndị mechara emechara, mechaa, mbukota, na en-trucking.Each ọ bụla anyị nwere QC iji chịkwaa ogo ahụ. Maka ngwaahịa ndị na-erughị eru, anyị ga-edozi ha ruo mgbe ha ruru eru. Anyị nwere ike ịkwado na anyị nwere ike ịnye ngwaahịa dị elu na ọrụ kacha mma maka gị.
100% Polyester Micro Plush Waterproof Matress Encasement
Ngwaahịa: 100% Polyester Micro Plush Waterproof Matress Encasement
Uwe: 100% Polyester 145gsm kpara obere terry + 40gsm TPU
Rịba ama: 1.Zipi dị nso na nha 3, akụkụ 2 ogologo na 1 obere akụkụ. 2.With Velcro Flap nso.
Ihe nkpuchi na-ekpuchi uru: jụ mkpọtụ, jụ uzuzu, kpuchie matarasị gị, kpuchido akpụkpọ gị, nke kwesịrị ekwesị maka ndị agadi, ụmụaka, anụ ụlọ nke ezinụlọ iji mee ihe.
100% Polyester Terry Ohiri Isi echebe
Ihe: 100% polyester Terry fabric with TPU. Oge: Oge opupu ihe ubi / udu mmiri / udu nmiri / udu mmiri. Nkwakọ ngwaahịa: carelabel, tinye kaadị, bọọdụ ntinye, ihe mmado, polybad, katọn. Ihe: 100% Polyester 95gsm Terry fabric na 35gsm TPU.
Inogide mgbochi ndina chinchi okomoko King Size Hypoallergenic Waterproof matarasị echebe
95 GSM 100% polyester nwere 35GSM TPU lamination, SKIRT: 60 GSM kpara akpa polyester. Akpa PVC na kaadi ntinye na kaadiboodu, ma ọ bụ dị ka arịrịọ gị. 1pc / akpa. 100 PC / agba agba na nha nha, 500 tent / omenala agba na mbuaha size, nnabata sample iji.
70GSM Microfiber + 70GSM Na-ejuputa + 40GSM na-abụghị kpara. Akpa PVC na kaadi ntinye na kaadiboodu, ma ọ bụ dị ka arịrịọ gị. 1pc / akpa. 100 PC / agba agba na nha nha, 500 tent / omenala agba na mbuaha size, nnabata sample iji.
Ihe nkọwapụta Aha Aha Durable Anti Bed Bugs Luxury King Size Hypoallergenic Waterproof Matress Protector Brand BIODY / OEM Fabric 95 GSM 100% polyester with 35GSM TPU lamination, SKIRT: 60 GSM kpara akpa polyester ákwà Size eze size ma ọ bụ ahaziri ahaziri nha arọ 130gsm maka akwa, 0.65 kg / pc ndị ọzọ dị arọ 110gsm-180gsm 100% polyester terry Mbukota PVC akpa nwere agba ntinye kaadi na kaadiboodu, ma ọ bụ dị ka arịrịọ gị. 1pc / akpa MOQ 10 ...
Waterproof matarasị echebe
100% Mmiri mmiri - Nchedo kachasị megide ọsụsọ, akwa bed, mmiri na stains; 10-afọ àgwà nkwa (IHE: N'ihi na isii kwadoro nchebe). Hypoallergenic - Na-egbochi mites ájá, allergens, bacteria, mildew na ebu - Maka kacha nfụkasị ahụ efe.